News Collection: कोलावरी डी नेपाली भर्सनमा !
कोलावरी डी नेपाली भर्सनमा !
चर्चित दक्षिण भारतीय सिनेमाको गीत ‘कोलाभरी डी’लाई नेपाली भर्सनमा गाइएको छ । बलिउड अभिनेत्री उदिता गोस्वामीले दक्षिण भारतका धनुषले गाएको गीतलाई आफ्नै स्वरमा नेपाली र अँग्रेजीमा गाएकी छिन् । गएराती युट्युवमा सेयर गरिएको यो गीत निकै हिट बनिरहेको छ । तामिल सिनेमा ‘थ्री’को यो गीतलाई उदिताले नेपालीमा किन अनुवाद गरिन्, खोजीको विषय बनेको छ ।
नेपालमा समेत कोलाभरीको फिभर बढिरहँदा उदिताको यो गीतले झनै नेपाली बजार पिट्न अनुमान गरिएको छ । मेल भ्वाइसमा धनुषले गाएको गीतको भावार्थलाई उदिताले नेपाङ्ग्रेजी शब्द दिएकी छिन् । युट्युवमा सेयर गरिएपछि यो गीतलाई धेरै रुचाएका छन् । समिक्षकहरू मिनिङलेस गीत कोलाभरी डीले विश्व संगीतको पुनव्र्याख्य गरेको बताउँछन् । रजनीकान्तका ज्वाईँ समेत रहेका धनुषले कोलाभरी प्रेममा पागल भएको व्यक्तिले गाउने गीत भनेर भनेका थिए ।